Izwi Foundation • Pamusoro Pedu - Vaparidzi Vokufungisisa uye Kuparadzwa
Izwi Foundation, Inc. isangano risingabatsiri rakapihwa mari muNew York musi waMay 22, 1950. Iri ndiro chete sangano riripo iro rakavambwa nekupihwa mvumo naVaPercival nekuda kwezvinangwa izvi. Iyo hwaro haibatanidzwe kana kubatana nechero rimwe sangano, uye haitsigire kana kutsigira chero munhu, gwara, chipangamazano, mudzidzisi kana boka rinoti rakafemerwa, rakagadzwa kana kupihwa mvumo yekutsanangura uye kududzira zvakanyorwa naPercival.
Zvinoenderana nemitemo yedu, hwaro hunogona kuve nehuwandu husingaverengeki hwenhengo dzinosarudza kuzvipa rutsigiro uye kubatsirwa nemasevhisi ayo. Kunze kwezvikamu izvi, maTrasti ane matarenda akasarudzika nenzvimbo dzehunyanzvi vanosarudzwa, ivo vozosarudza Bhodhi revatungamiriri vanoona nezve manejimendi manejimendi uye kutonga kwezvinhu zvekambani. Iwo maTrasti uye maDirector vanogara munzvimbo dzakasiyana muUnited States nekune dzimwe nyika. Isu tinobatana pamwechete kumusangano wepagore uye kutaurirana kuri kuenderera mukati megore kuzadzisa chinangwa chedu chakagovaniswa- kuita kuti zvinyorwa zvaPercival zviwanikwe nyore uye kubatsira vatinonamata navo vanotibata nesu kubva kumativi mazhinji epasi kuti vagadzirise zvidzidzo zvavo uye dambudziko iro vanhu vazhinji vanosangana naro. mukuda kwavo kuti vanzwisise hupenyu hwepano pasi. Kuenda kuchido ichi cheChokwadi, Kufunga Nekupedzisira haina kuburitswa maererano nehukuru, kudzika uye kuwanda.
Uye saka, kuzvitsaurira kwedu uye manejimendi ndeyokuzivisa kuvanhu venyika zvirimo uye zvinoreva bhuku iri Kufunga Nekupedzisira pamwe nemamwe mabhuku akanyorwa naHarold W. Percival. Kubva 1950, Izwi Foundation rakaburitsa nekuparadzira mabhuku ePercival uye kubatsira vaverengi mukunzwisisa kwavo zvakanyorwa naPercival. Kusvikira kwedu kunopa mabhuku kuvasungwa vemajeri nemaraibhurari. Isu tinopawo mabhuku akaderedzwa paanozogoveranwa nevamwe. Kuburikidza neMudzidzi wedu kuenda kuChirongwa cheVadzidzi, isu tinobatsira kufambisa nzira yeayo enhengo dzedu angade kudzidza mabasa aPercival pamwechete.
Vazvipiri vanokosha kune sangano redu sezvavanotibatsira kuwedzera zvakanyorwa naPercival kune kuverenga yakawanda. Tiri neropafadzo yekuve nerubatsiro rwehama dzakawanda kwemakore. Mipiro yavo inosanganisira kugovera mabhuku kumabhuku ekuraibhurari, kutumira mabhurocha edu kune shamwari, kuronga mapoka ekudzidza akazvimiririra, nemabasa akafanana. Isuwo tinogamuchira zvipo zvemari izvo zvakakosha pakutibatsira kuti tirambe tichiita basa redu. Tinogamuchirwa uye tinoonga zvikuru rubatsiro urwu!
Sezvatinoenderera mberi nekuedza kwedu kugovera Chiedza chenhaka yaPercival kumunhu, tinokoka muchidimbu vaverengi vedu vatsva kuti vatibatane nesu.
"Mharidzo Yedu" ndiyo yakatanga kunyorwa neHarold W. Percival pamagazini yake inozivikanwa pamwedzi, The Word. Akagadzira ipfupi vhezheni yemupepeti senge peji rekutanga remagazini. Izvo zviri pamusoro ikudzokorora kweiyi ipfupi version kubva vhoriyamu yekutanga yemakumi maviri neshanu vhoriyamu yakasungirirwa, 1904 - 1917. Iyo yekunyora inogona kuverengwa yakazara pane yedu Editorials peji.